“အမျိုးသမီးများနတ်ပြည်သို့အဘယ်ကြောင့်အရောက် များရသလဲ?” - Amawpyay
အမျိုးသမီးများသည် ခွန်အားဗလမှာသေးငယ်သော်လည်း ဥာဏ်ပညာအရာမှာ- အမျိုသားများထက် လေးဆသာတယ် = လုံ့လဝီရိယအရာမှာလည်း ခြောက်ဆ သာတယ်”ဟု မန်လည်ဆရာတော်က ဆိုပါသည်။
ဒါကြောင့်လည်း ကောသလမင်းကြီးဟာ တိုင်းသူပြည်သားများနဲ့အပြိုင် ဒါနပြုသည့်အခါ အသာဆုံး အမြတ်ဆုံး “အသဒိသအလှူ ကြီး”ဖြစ်ဖို့ မလ္လိကာ ဖိဖုရားကြီး၏ ဥာဏ်ပညာ နဲ့လုံ့လဝီရိယ အကူညီကို ယူခဲ့ရဘူးပါသည်။
တဖန် အမျိုသမီးများသည် သဒ္ဓါ -ယုံကြည်လွယ်သည် ကရုဏာ- သနားကြင်နာတတ်သည် စာဂ- စွန့်ကြဲမှု၌ ဝါသနာထုံသည် ပညာ-တွေးခေါ် မျှော်မြင်တတ်သည် ဝီရိယ-ထကြွလုံလဝီရိယ ရှိတတ်သည် ဤ ငါးပါး သည် အမျိုးသမီးအများစုမှာ ရှိနေကြပါသည်။
ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှာနေလည်း သက်သီးတစ်လုံး ပန်းတစ်ပွင့် ဆွမ်းတစ်ယောက်မတော့ အမြဲလှူ နေတတ်ကြသည်။
ဈေးဝယ်ထွက်ရင်း -ခရီးထွက်ရင်း အလှူ ခံပုဂ္ဂို လ်တွေ့ရင် အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး ပေးလှူ နေတတ်ကြသည်
ဒါကြောင့်လည်း သူတို့မှာနေ့တိုင်း ကုသိုလ်တွေက စုမိဆောင်းမိနေကြသည် ကျောင်းကန်ဘုရားများမှာ ဥပုသ်စောင့်လျှင် တရားနာလျှ င် ဆွမ်းလောင်းလှူ လျှင် တရားစခန်းဝင်ယောဂီတွေကစ အမျိုးသမီးတွေဘဲ များနေတတ်ကြသည်။
ဤ ကုသိုလ်တွေကြောင့်ဘဲ ၎င်းတို့မှာ နတ်ပြည်မှာ အဖြစ်များနေကြဟန်တူပါသည် ကျမ်းဂန်များအရ နတ်ပြည်မှာ နတ်သားကရှားပြီး နတ်သမီးများမှာ အမတန်များပြီး-နတ်သားတစ်ယောက်လျှင် နတ်သမီးက ငါးရာ တစ်ထောင် ရှိကြသည်”ဟုဆိုပါသည်
နေ့စဉ် သက်သီးတစ်လုံး ပန်းတစ်ပွင့် ဆွမ်းတစ်ယောက်မ အလှူ များမှာ အမျိုးသားများ မလုပ်နိုင်သော အလှူ “ဟုပင်ဆိုချ င်ပါသည်
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသားများမှာ စားဝတ်နေရေး ရှာဖွေနေရသည်က တစ်ကြောင်း- ( နည်းများမဆို ကုသိုလ်လေးတွေကို စိတ်မရောက်နိုင်) သဒ္ဓါ တရားကို အမြဲသံသယ ဝင်နေတတ်ကြသည်က တစ်ကြောင်း – ကိုယ်တွင်းဓာတ်ခံမှာ မာနတရားလေး ရှိနေတတ်ကြသည်ကလည်း တစ်ကြောင်း ဤအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်” အသေးအဖွဲ ကုသိုလ်လေးတွေ မစုမိကြတာ”ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
“ကိုယ်ရှာထားတဲ့စည်းပွားဥစ္စာ မယားလှူတာ ယောက်ျားဖြစ်သူ မရဘူးလား” မေးစရာရှိပါသည် “မရပါဘူး” စိတ်မပါလျှ င်လည်း မရဘူး မသိလျှင်လည်း မရပါဘူး ” အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နှစ်ပါး ကံတရားကား- မယားပြုရာစိတ်မပါလျှင် လင်မှာမရ- လင်ပြု ကလည်း မိန်းမအိမ်သူ- စိတ်မတူသော် မှတ်ယူမှန်စွာမရရှာဘူး****** တဲ့။
ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ သူတို့မှာအများကြီးရှိနေပါသည် ကုန်ကုန်ပြောရသော် လင်ယောက်ျား ဆူလို့ဆဲလို့ သည်းခံပြီး အမျက်ဒေါသ မထွက်လျှင်တောင် နတ်ပြည် ရောက်နိုင်ပါသည်။ သက်သီးလေးတစ်လုံးလှူ တာကစ နတ်ပြည် ရောက်နိုင်ပါသည်။
သာဓကမှာ**? အခါတပါး အရှင်မောဂ္ဂလာန် မထေရ်ကြီးဟာ နတ်ပြည်သို့ ကြွတော်မူသောအခါ*? ကိုယ်ရောင်တောက်ပပြီး ဝင်းဝါနေတဲ့ နတ်သမီးများနဲ့ တွေ့တော့*?
“အသင်နတ်သမီး လူ့ဘဝက အဘယ်ကုသိုလ်တွေများ လုပ်ခဲ့လို့ ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ ဗိမာန်ကြီးနဲ့ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေ တောက်ပလို့ နေရတာလဲ”ဟု မေးပါသည်။
သည်အခါနတ်သမီးက ” အရှင်ဘုရား မပြောပလောက်ပါဘူး ကုသိုလ်ရယ်လို့လည်း မရှိခဲ့ပါဘူး- ကဿပဘုရားလက်ထက်က တပည့်တော်မသည် သူတပါးရဲ့ ကျွန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။
အဲဒီဘဝမှာ တပည့်တော်မရဲ့ လင်ယောက်ျားဖြစ်သူ ကလည်း အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်တယ် =.ရန်ရှာတယ် တွေ့တာနဲ့ ကောက်ပေါက်တာ- ဆံပင်ဆွဲ ခဏခဏ ရိုက်ပုပ်တာ ခံရတယ်။
အဲ့ဒီခါ တပည့်တော်မ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတယ်- “ဤယောက်ျားကား နင့်အရှင်သခင်ဖြစ်သည်- သံပူကပ်၍ တံဆိတ်ခပ်လျှင်လည်း ခံရမည်။ ခြေ လက် နား နာခေါင်း ဖြတ်လျှင်လည်း ခံရမည် ငါ၏လင်ယောက်ျားသည် ငါ့အား အစိုးရပေသည်။
အမျက်မထွက်နဲ့”ဟုမိမိကိုယ်ဆုံးမပြီး အမျ က်ဒေါသမထွက်ခဲ့ပါဘုရား” ဒီလိုအမျက်ဒေါသကို ချုပ်တည်းနိုင်ခဲ့လို့ နတ်စည်းစိမ် ချမ်းသာကို ခံစားနေရတာပါဘုရား”ဟု လျှောက်ပါသတဲ့။
နောက်မထေရ်ကြီးလည်းတနေရာသွားပြန်တော့ နတ်သမီးတွေနဲ့တွေ့ပြန်ပါသတဲ့= ဒီအခါမထေရ်ကြီးက ” အသင်နတ်သမီး လူ့ဘဝက အဘယ်ကုသိုလ်တွေများ ပြုခဲ့တာပါလဲ”တဲ့ နတ်သမီးက “အရှင်ဘုရား လူ့ဘဝက ရဟန်းတစ်ပါးအား ကြံတစ်ချောင်းလှူ ခဲ့ပါတယ်ဘုရား”
နောက်နတ်သမီးတစ်ပါးကလည်း* “တပည့်တော်လည်း ရဟန်းတစ်ပါးအား တည်သီး လှူ ခဲ့ပါသည်ဘုရား”တဲ့
နောက်ထပ် နတ်သမီးတစ်ပါးကလည်း “တပည့်တော်မလည်း ရဟန်းတစ်ပါးအား သခွါးသီးတစ်လုံးကိုလှူ ခဲ့ပါတယ်ဘုရား”တဲ့
နောက်နတ်သမီးကလည်း ” တပည့်တော်မလည်း ဖက်သက်တရော်သီးကို လှူ ခဲ့ပါတယ်ဘုရား”တဲ့
နောက်ထပ်နတ်သမီးကလည်း “သက်မြစ်တစ်ဆုပ်ကို လှူ ခဲ့ပါတယ်ဘုရား”တဲ့
နောက်နတ်သမီးကလည်း ” တပည့်တော်မလည်း တမာရွက်တစ်ဆုပ်ကို လှူ ခဲ့ပါတယ်ဘုရား”တဲ့
ဤသို့သောကုသိုလ် အကြောင်းများကြောင့် နတ်စည်းချမ်းသာကို ခံစားနေရကြောင်း လျှောက်ထားကြပါသည်။
အရှင်မောဂ္ဂလာန်မထေရ်ကြီးလည်း လူ့ပြည်သို့ ပြန်ကြွပြီး ဘုရှင်းရှင်ကို လျှောက်ထားခဲ့သည်။
” မြတ်စွာဘုရား မပြောပလောက်တဲ့ ကုသိုလ်လေးတွေနဲ့ နတ်ပြည် ရောက်နိုင်သလားဘုရား”တဲ့ ဘုရားရှင်က “ချစ်သားမောဂ္ဂလာန် ရောက်တယ်-မရောက်ဘူးဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင် ဒိဋ္ဌမျက်မြင် တွေ့ခဲ့တယ် မဟုတ်လား”ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။
ဒါကြောင့် လူ့ပြည်မှာ ဘယ်သူတွေက ကုသိုလ်တွေ စုမိဆောင်းမိနေပြီ= ဘယ်သူတွေကတော့ဖြင့် နတ်ပြည်ကို အများဆုံး ရောက်နိုင်သည်ဆိုတာ သိလောက်ကြပြီထင်ပါသည်။
အဓိကက စေတနာဘဲ စေတနာကောင်းလျှင် ကံကောင်းနိုင်သည် အားလုံး ကံကောင်းကြပါစေ*******?
Credit= ဝန်းသို အရှင်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
အမြိုးသမီးမြားသညျ ခှနျအားဗလမှာသေးငယျသျောလညျး ဉာဏျပညာအရာမှာ- အမြိုသားမြားထကျ လေးဆသာတယျ = လုံ့လဝီရိယအရာမှာလညျး ခွောကျဆ သာတယျ”ဟု မနျလညျဆရာတျောက ဆိုပါသညျ။
ဒါကွောငျ့လညျး ကောသလမငျးကွီးဟာ တိုငျးသူပွညျသားမြားနဲ့အပွိုငျ ဒါနပွုသညျ့အခါ အသာဆုံး အမွတျဆုံး “အသဒိသအလှူ ကွီး”ဖွဈဖို့ မလ်လိကာ ဖိဖုရားကွီး၏ ဉာဏျပညာ နဲ့လုံ့လဝီရိယ အကူညီကို ယူခဲ့ရဘူးပါသညျ။
တဖနျ အမြိုသမီးမြားသညျ သဒ်ဓါ -ယုံကွညျလှယျသညျ ကရုဏာ- သနားကွငျနာတတျသညျ စာဂ- စှနျ့ကွဲမှု၌ ဝါသနာထုံသညျ ပညာ-တှေးချေါ မြှျောမွငျတတျသညျ ဝီရိယ-ထကွှလုံလဝီရိယ ရှိတတျသညျ ဤ ငါးပါး သညျ အမြိုးသမီးအမြားစုမှာ ရှိနကွေပါသညျ။
ဒါကွောငျ့အမြိုးသမီးမြားသညျ အိမျမှာနလေညျး သကျသီးတဈလုံး ပနျးတဈပှငျ့ ဆှမျးတဈယောကျမတော့ အမွဲလှူ နတေတျကွသညျ။
ဈေးဝယျထှကျရငျး -ခရီးထှကျရငျး အလှူ ခံပုဂ်ဂို လျတှရေ့ငျ အယုတျအလတျအမွတျမရှေး ပေးလှူ နတေတျကွသညျ
ဒါကွောငျ့လညျး သူတို့မှာနတေို့ငျး ကုသိုလျတှကေ စုမိဆောငျးမိနကွေသညျ ကြောငျးကနျဘုရားမြားမှာ ဥပုသျစောငျ့လြှငျ တရားနာလြှ ငျ ဆှမျးလောငျးလှူ လြှငျ တရားစခနျးဝငျယောဂီတှကေစ အမြိုးသမီးတှဘေဲ မြားနတေတျကွသညျ။
ဤ ကုသိုလျတှကွေောငျ့ဘဲ ၎င်းငျးတို့မှာ နတျပွညျမှာ အဖွဈမြားနကွေဟနျတူပါသညျ ကမျြးဂနျမြားအရ နတျပွညျမှာ နတျသားကရှားပွီး နတျသမီးမြားမှာ အမတနျမြားပွီး-နတျသားတဈယောကျလြှငျ နတျသမီးက ငါးရာ တဈထောငျ ရှိကွသညျ”ဟုဆိုပါသညျ
နစေ့ဉျ သကျသီးတဈလုံး ပနျးတဈပှငျ့ ဆှမျးတဈယောကျမ အလှူ မြားမှာ အမြိုးသားမြား မလုပျနိုငျသော အလှူ “ဟုပငျဆိုခြ ငျပါသညျ
အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော အမြိုးသားမြားမှာ စားဝတျနရေေး ရှာဖှနေရေသညျက တဈကွောငျး- ( နညျးမြားမဆို ကုသိုလျလေးတှကေို စိတျမရောကျနိုငျ) သဒ်ဓါ တရားကို အမွဲသံသယ ဝငျနတေတျကွသညျက တဈကွောငျး – ကိုယျတှငျးဓာတျခံမှာ မာနတရားလေး ရှိနတေတျကွသညျကလညျး တဈကွောငျး ဤအကွောငျးကွောငျးတှကွေောငျ့” အသေးအဖှဲ ကုသိုလျလေးတှေ မစုမိကွတာ”ဟု ဆိုခငျြပါသညျ။
ဒါကွောငျ့ အမြိုးသမီးတှမှော နတျပွညျရောကျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ သူတို့မှာအမြားကွီးရှိနပေါသညျ ကုနျကုနျပွောရသျော လငျယောကျြား ဆူလို့ဆဲလို့ သညျးခံပွီး အမကျြဒေါသ မထှကျလြှငျတောငျ နတျပွညျ ရောကျနိုငျပါသညျ။ သကျသီးလေးတဈလုံးလှူ တာကစ နတျပွညျ ရောကျနိုငျပါသညျ။
သညျအခါနတျသမီးက ” အရှငျဘုရား မပွောပလောကျပါဘူး ကုသိုလျရယျလို့လညျး မရှိခဲ့ပါဘူး- ကဿပဘုရားလကျထကျက တပညျ့တျောမသညျ သူတပါးရဲ့ ကြှနျမဖွဈခဲ့ဘူးတယျ။
အဲဒီဘဝမှာ တပညျ့တျောမရဲ့ လငျယောကျြားဖွဈသူ ကလညျး အမြိုးမြိုးနှိပျစကျတယျ =.ရနျရှာတယျ တှတေ့ာနဲ့ ကောကျပေါကျတာ- ဆံပငျဆှဲ ခဏခဏ ရိုကျပုပျတာ ခံရတယျ။
အဲ့ဒီခါ တပညျ့တျောမ ကိုယျ့ကိုယျကိုဆုံးမတယျ- “ဤယောကျြားကား နငျ့အရှငျသခငျဖွဈသညျ- သံပူကပျ၍ တံဆိတျခပျလြှငျလညျး ခံရမညျ။ ခွေ လကျ နား နာခေါငျး ဖွတျလြှငျလညျး ခံရမညျ ငါ၏လငျယောကျြားသညျ ငါ့အား အစိုးရပသေညျ။
အမကျြမထှကျနဲ့”ဟုမိမိကိုယျဆုံးမပွီး အမြ ကျဒေါသမထှကျခဲ့ပါဘုရား” ဒီလိုအမကျြဒေါသကို ခြုပျတညျးနိုငျခဲ့လို့ နတျစညျးစိမျ ခမျြးသာကို ခံစားနရေတာပါဘုရား”ဟု လြှောကျပါသတဲ့။
နောကျမထရျေကွီးလညျးတနရောသှားပွနျတော့ နတျသမီးတှနေဲ့တှပွေ့နျပါသတဲ့= ဒီအခါမထရျေကွီးက ” အသငျနတျသမီး လူ့ဘဝက အဘယျကုသိုလျတှမြေား ပွုခဲ့တာပါလဲ”တဲ့ နတျသမီးက “အရှငျဘုရား လူ့ဘဝက ရဟနျးတဈပါးအား ကွံတဈခြောငျးလှူ ခဲ့ပါတယျဘုရား”
နောကျနတျသမီးတဈပါးကလညျး* “တပညျ့တျောလညျး ရဟနျးတဈပါးအား တညျသီး လှူ ခဲ့ပါသညျဘုရား”တဲ့
နောကျထပျ နတျသမီးတဈပါးကလညျး “တပညျ့တျောမလညျး ရဟနျးတဈပါးအား သခှါးသီးတဈလုံးကိုလှူ ခဲ့ပါတယျဘုရား”တဲ့
နောကျနတျသမီးကလညျး ” တပညျ့တျောမလညျး ဖကျသကျတရျောသီးကို လှူ ခဲ့ပါတယျဘုရား”တဲ့
နောကျထပျနတျသမီးကလညျး “သကျမွဈတဈဆုပျကို လှူ ခဲ့ပါတယျဘုရား”တဲ့
နောကျနတျသမီးကလညျး ” တပညျ့တျောမလညျး တမာရှကျတဈဆုပျကို လှူ ခဲ့ပါတယျဘုရား”တဲ့
ဤသို့သောကုသိုလျ အကွောငျးမြားကွောငျ့ နတျစညျးခမျြးသာကို ခံစားနရေကွောငျး လြှောကျထားကွပါသညျ။
အရှငျမောဂ်ဂလာနျမထရျေကွီးလညျး လူ့ပွညျသို့ ပွနျကွှပွီး ဘုရှငျးရှငျကို လြှောကျထားခဲ့သညျ။
” မွတျစှာဘုရား မပွောပလောကျတဲ့ ကုသိုလျလေးတှနေဲ့ နတျပွညျ ရောကျနိုငျသလားဘုရား”တဲ့ ဘုရားရှငျက “ခဈြသားမောဂ်ဂလာနျ ရောကျတယျ-မရောကျဘူးဆိုတာ သငျကိုယျတိုငျ ဒိဋ်ဌမကျြမွငျ တှခေဲ့တယျ မဟုတျလား”ဟု မိနျ့တျောမူပါသညျ။
ဒါကွောငျ့ လူ့ပွညျမှာ ဘယျသူတှကေ ကုသိုလျတှေ စုမိဆောငျးမိနပွေီ= ဘယျသူတှကေတော့ဖွငျ့ နတျပွညျကို အမြားဆုံး ရောကျနိုငျသညျဆိုတာ သိလောကျကွပွီထငျပါသညျ။
Credit= ဝနျးသို အရှငျမှ ကူးယူဖျောပွသညျ
အပါယ်ကျစေသောအလှူ ၁၀ မျိုး
အပါယ်​ကျစေ​သော အလှူ (၁၀) မျိုး ၁။ သမဇ္ဇဒါန-ကချေအလှူ ( အငြိမ့်ဇာတ်ပွဲ )။ ၂။ မဇ္ဇဒါန -သေရည်သေရက်အလှူ။ ၃။ ဣတ္ထိဒါန – မိန်းမအလှူ။ ၄။ ဥသဘဒါန -နွားလား၊ မြင်းလား အလှူ။ ၅။ စိတ္တကမ္မဒါန – ကာမဂုဏ်ကို နိုးကြွစေသော ပန်ချီဆေးရေး အလှူ။ ၆။ သတ္ထဒါန – လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက် အလှူ။ ၇။ ၀ိသဒါန – အဆိပ်အလှူ။ ၈။ သင်္ခလိကဒါန – လက်ထိတ် သံခြေချင်း နှောင်ကြိုးအလှူ။ ၉။ ကုက္ကုရ သူကရ ဒါန-ကြက် ၀က် သားကောင်အလှူ။ …